မေလ (၁) ရက်နေလေးမှာတော့ သူ့တို့ရဲ့ ချစ်ရတဲ့သမီးလေး တစ်လပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းချစ်စရာပုံလေးနဲ့တကွချပြလာတဲ့ သူထူးစံနဲ့ထိုက်ဆုဝင် – Nyi Ma Lay
မေလ (၁) ရက်နေလေးမှာတော့ သူ့တို့ရဲ့ ချစ်ရတဲ့သမီးလေး တစ်လပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းချစ်စရာပုံလေးနဲ့တကွချပြလာတဲ့ သူထူးစံနဲ့ထိုက်ဆုဝင်
အကယ်ဒမီ သူထူးစံနဲ့ ထိုက်ဆုဝင်း တိုကတော့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဝါသနာ တူတဲ့ ဇနီးမောင်နှံလို ဆိုနိုင် ပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲ မှာ ကျင်လည် ရင်းနဲ့ ဖူးစာဆုံခဲ့ကြတဲ့ သူထူးစံနဲ့ ထိုက်ဆုဝင်းတို ဟာ အခုဆိုရင် အကြင် လင်မယားတွေ အဖြစ် တစ်အိုး တစ်အိမ် ထူထောင် ထားပြီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို အတူပုံဖော်နေ ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က မေလ (၁) ရက်နေ့ မှာတော့ သူထူစံဟာ သူတို ဇနီးမောင်နှံ ရဲ့ သမီးလေး ဖောင်းဖောင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ချပြ လာပြီး “သမီးလေး ဖောင်းဖောင်း မွေးတာ ၁ ၁ လပြည့်ပြီဗျာ…………. သမီးလေးကို လ ချောချော မွေ့မွေ့ ကောင်းမွန်စွာ မွေးဖွားသန့်စင် ပေးကြပါသော သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ရီရီနိုင်၊ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်သိင်္ဂီဝင်းတိုနှင့် တကွ GRAND HANTHA INTERNATIONAL HOSPITAL မှ ဆရာဝန်များနှင့် ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ ” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ သူထူးစံနဲ့ ထိုက်ဆုဝင်းတိုရဲ့ သမီးလေး ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့ က မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့မှာ တစ်လ တိတိပြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ္ဒမီ သူထူးစံနဲ႔ ထိုက္ဆုဝင္း တိုကေတာ့ စိတ္တူ ကိုယ္တူ ဝါသနာ တူတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံလို ဆိုနိုင္ ပါတယ္။ အႏုပညာေလာကထဲ မွာ က်င္လည္ ရင္းနဲ႔ ဖူးစာဆုံခဲ့ၾကတဲ့ သူထူးစံနဲ႔ ထိုက္ဆုဝင္းတို ဟာ အခုဆိုရင္ အၾကင္ လင္မယားေတြ အျဖစ္ တစ္အိုး တစ္အိမ္ ထူေထာင္ ထားၿပီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝေလးကို အတူပုံေဖာ္ေန ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မေန႔က ေမလ (၁) ရက္ေန႔ မွာေတာ့ သူထူစံဟာ သူတို ဇနီးေမာင္ႏွံ ရဲ့ သမီးေလး ေဖာင္းေဖာင္းရဲ့ ဓာတ္ပုံကို ခ်ၿပ လာၿပီး “သမီးေလး ေဖာင္းေဖာင္း ေမြးတာ ၁ ၁ လျပည့္ၿပီဗ်ာ…………. သမီးေလးကို လ ေခ်ာေခ်ာ ေမြ႕ေမြ႕ ေကာင္းမြန္စြာ ေမြးဖြားသန႔္စင္ ေပးၾကပါေသာ သားဖြားမီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚရီရီနိုင္၊ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚသိဂႌဝင္းတိုႏွင့္ တကြ GRAND HANTHA INTERNATIONAL HOSPITAL မွ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို အထူး ေက်းဇူးတင္ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့ပါတယ္။ သူထူးစံနဲ႔ ထိုက္ဆုဝင္းတိုရဲ့ သမီးေလး ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔ က ေမြးဖြားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔မွာ တစ္လ တိတိျပည့္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Previous post ဒီနေ့မှာတော့ သူမချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ ကချင်ရိုးရာဝတ်စုံလေးဝတ်ကာ ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မအေးသောင်း
Next post ချစ်သူနှစ်ဦးခရီတွေထွက်ပြီး အပန်းဖြေအနားယူရင်းရိုဆန်ဆန်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေဆီချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကောင်လေး